Batergaaf teessoolee kennaaf deebii saagi. Kuusadeetaa irraa dirreewwan teessoo saaguu ni dandeessa.
Kuusadeetaa, deetaa teessoo galchuuf barbaaddu of keessaa qabuu filadhu.
Gabatee kuusadeetaa, deetaa teessoo galchuuf barbaaddu of keessaa qabuu filadhu.
Dirree kuusadeetaa, deetaa teessoo galchuuf barbaaddu of keessaa qabuu filadhuutii, kana booda, qabduu xiyyaa gara bitaa cuqaasi. Deetaan, sanduuqaa teessoo qaree of keessaa qabuutti dabalama.
Title is: Batergaa